July 2019 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Window ကျရခြင်း အကြောင်းအရင်း
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် တခါတလေ လာပီး မေးကြတဲ့ ဝင်းဒိုးမလာတော့ ဘာမှလဲ မတက်တော့ဘူးး ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ အတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်....အဓိကပြောခ...
Window ကျရခြင်း အကြောင်းအရင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:24 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် တခါတလေ လာပီး မေးကြတဲ့ ဝင်းဒိုးမလာတော့ ဘာမှလဲ မတက်တော့ဘူးး ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ အတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်....အဓိကပြောခ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:24 PM No comments:
Computer တက်ပီး monitor မှာ ဘာမှမပေါ်သည့် ပြသနာ အဖြေရှာကြည့်ခြင်း
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Computer တက်ပီး monitor မှာ ဘာမှမပေါ်သည့် ပြသနာ အဖြေရှာကြည့်ခြင်း ဒါလေးလည်း အဖြစ်များတဲ့ problem လေးပါဘဲ ဖြစ်နိုင...
Computer တက်ပီး monitor မှာ ဘာမှမပေါ်သည့် ပြသနာ အဖြေရှာကြည့်ခြင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:55 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Computer တက်ပီး monitor မှာ ဘာမှမပေါ်သည့် ပြသနာ အဖြေရှာကြည့်ခြင်း ဒါလေးလည်း အဖြစ်များတဲ့ problem လေးပါဘဲ ဖြစ်နိုင...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:55 PM No comments:
Windows တင်လို့ မရတာနဲ့ HDD မသိသောပြဿနာ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Windows တင်လို့ မရဖြစ်နေသူများနဲ့ External HDD ကို စက်ထဲမှာ တပ်လိုက်သော်လည်း HDD မသိ၊ မပေါ်ဘူး ဆိုသူများအတွက် Hard ...
Windows တင်လို့ မရတာနဲ့ HDD မသိသောပြဿနာ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:49 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Windows တင်လို့ မရဖြစ်နေသူများနဲ့ External HDD ကို စက်ထဲမှာ တပ်လိုက်သော်လည်း HDD မသိ၊ မပေါ်ဘူး ဆိုသူများအတွက် Hard ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:49 PM No comments:
မိမိ ရဲ့ ကွန်ပျူတာ ဟာ Power အဖွင့်မှာ windows Loading လုပ်ပြီးလေးနေသလား windows ပွင့်ပြီးရင်လဲ သုံးမရသေးဘဲ ဟန်းနေသလား ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် မိမိ ရဲ့ ကွန်ပျူတာ ဟာ Power အဖွင့်မှာ windows Loading လုပ်ပြီးလေးနေသလား windows ပွင့်ပြီးရင်လဲ သုံးမရသေးဘဲ ဟန်းနေသလာ...
မိမိ ရဲ့ ကွန်ပျူတာ ဟာ Power အဖွင့်မှာ windows Loading လုပ်ပြီးလေးနေသလား windows ပွင့်ပြီးရင်လဲ သုံးမရသေးဘဲ ဟန်းနေသလား ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:36 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် မိမိ ရဲ့ ကွန်ပျူတာ ဟာ Power အဖွင့်မှာ windows Loading လုပ်ပြီးလေးနေသလား windows ပွင့်ပြီးရင်လဲ သုံးမရသေးဘဲ ဟန်းနေသလာ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:36 PM No comments:
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Solid State Drive လို့ခေါ်တဲ့ SSD တွေက ကျနော်တို့နေ့စဉ်ထိတွေ့နေကျ ဟာ့ဒစ် (HDD) တွေထက်အဆများစွာပိုကာင်း ပိုမြန်တာတော့ဟ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:04 PM No comments:
သင့်ရဲ့ ANDROID ဖုန်း ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဒီနည်းဖြင့် ရှာကြည့်ပါ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် စမတ်ဖုန်း ပျောက်သွားတဲ့အဖြစ်က အတော်အနေရခက်စေတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေနဲ့ စီမံဆောင်ရွက်ပါက လက်ငင်းပြန...
သင့်ရဲ့ ANDROID ဖုန်း ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဒီနည်းဖြင့် ရှာကြည့်ပါ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:50 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် စမတ်ဖုန်း ပျောက်သွားတဲ့အဖြစ်က အတော်အနေရခက်စေတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေနဲ့ စီမံဆောင်ရွက်ပါက လက်ငင်းပြန...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:50 PM No comments:
Window 10 တင်နည်း
Window 10 ISO မရှိသေးရင် မိမိ နှစ်သက်ရာ ဝင်းဒိုးကို ဒီနေရာကနေ ဒေါင်းယူပါ.. ပြီးရင် Windows USB/DVD Download Tool နှင့် အောက်ပ...
Window 10 တင်နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:13 PM Rating:5Window 10 ISO မရှိသေးရင် မိမိ နှစ်သက်ရာ ဝင်းဒိုးကို ဒီနေရာကနေ ဒေါင်းယူပါ.. ပြီးရင် Windows USB/DVD Download Tool နှင့် အောက်ပ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:13 PM No comments:
Windows7, 8 , 10 တင်နည်း
Windows7, 8 , 10 တင်နည်းအားလုံးအတွက် စာအုပ် Link တွေကို စုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အသုံး လိုရင် အောက်ပါ LINK မှဒေါင်းသွားနိုင်တယ်။by-...
Windows7, 8 , 10 တင်နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:59 PM Rating:5Windows7, 8 , 10 တင်နည်းအားလုံးအတွက် စာအုပ် Link တွေကို စုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အသုံး လိုရင် အောက်ပါ LINK မှဒေါင်းသွားနိုင်တယ်။by-...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 6:59 PM No comments: